गहन विषय, छिपछिपे लेखाइ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक २, २०७६ नारायणी देवकोटा
चार दशकदेखि मुक्तक, कविता, कथामा निरन्तर कलम चलाइरहेकी उषा शेरचनको पहिलो उपन्यास ‘आधि’ हालै बजारमा आएको छ  । उनको उपन्यास भन्दा मलाई लागिरहेको थियो, ‘थकाली, थाकखोला, पोखरेली समाजको कुरा आउला  ।
वा मूलधार भनिएको नेपाली साहित्यभन्दा अलि फरक आउला । मेरो यो अपेक्षा सायद उनकी भाउजू यशोकान्ति भट्टचनले निरन्तर उठाउँदै आएको जनजाति महिलाका सवाललाई नजिकबाट सुनिरहेर पनि जागृत भएको होला ।
उपन्यासको भूमिकामा कुनै कलेज पढाइरहेकी महिलाले आफू बलात्कारमा परेको कहानी सुनाएको कुराले उपन्यास लेख्न उत्प्रेरित गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । उपन्यासमा भित्र पसेपछि भने पूरै ठकुरी पाराको ‘आइसियोस् गइसियोस्’ भन्ने भाषाको अत्यधिक प्रयोगले यो कथा मूलधारभन्दा पर जाने छाँटकाँट ल्याउँदैन । उपन्यास सहरिया मध्यमवर्गीय परिवेशमा घुम्छ, ठ्याक्कै यही जातिको कुरा नभने पनि चालचलन लवजमा ठकुरी देखिन्छ ।
हिंसामा परेकी केटीले आफ्नो घर छोड्नुपरेको बाध्यताबाट उपन्यास सुरु हुन्छ । स्नातकोत्तरको पढाइ तयारी गरिरहेकी अन्तरमुखी स्वभावकी युवती जो साहित्यमा गम्भीर लगाव राख्छे उसले कुनै युवकले पठाएको प्रेमपत्रको भरमा विवाहका लागि भागेर घरबाट हिँडेको कुरा त्यति सुहाउँदो लाग्दैन । हुन त उपन्यास हो, लेखकको कल्पनाको उडान पनि होला तर पढ्दै गर्दा मलाई लागिरहेको कुरा लेखकले उल्लेख गरेको तहको पढाइ र लगाव भएकी युवती स्वतन्त्र आफ्नो क्षमताको भरमा उभिन प्रयास पनि गर्थी कि ? आफूलाई पटक–पटक बलात्कार गरिरहेको काकाविरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा मामिला गर्न जान्थी कि ? महिलाको अधिकारका लागि काम गरिरहेका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग पो लिन जान्थी र सहयोग वा ठक्कर पो पाउँथी कि ? लेखकले महिलाहरूले विशेष गरेर हिंसामा परेका महिलाहरूले एकल जीवनका लागि गरेको संघर्षलाई चटक्कै छोडेर एउटा हिंसाबाट बच्न सजिलो माध्यम खोजेको कुरा सतहमा देखिन्छ । तर उक्त कथाले हाम्रो समाजमा रहेको पुरुषको भरबिना महिला बाँच्नै सक्दैनन् भन्ने जुन मान्यता छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेको देखाउँदैन र ?
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली समाजमा बलात्कारबारे निकै बहस भइरहेका छन् । हरेक दिन चारजना महिला वा बालिका बलात्कार भएका घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन् । एक संस्थाको तथ्यांकअनुसार यसरी घटना दर्ता हुने जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै हुन्, ७५ प्रतिशत घटनाहरू त प्रहरी कार्यलयको गेटसम्म पनि पुग्दैनन् । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तबीचको ९ महिनामा ९ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना प्रहरीले दर्ता गरेको छ । नियमितजस्तै बलात्कारका घटनालाई हामीले समाचारको रूपमा पढिरहेका हुन्छौँ । उपन्यास पढिरहँदा पाठक बेलाबेला पत्रिका पढेको कि किताब पढेको जस्तै गरी झुक्किन सक्छ ।
पाठक त्यतिबेला झस्किन सक्छन्, जब सहरका मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम (संघर्ष) गरिहेका महिलाहरूबारे उपन्यासमा अलि अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका कुरा आउँछन् । काठमाडौंमा रहेका होटल रेस्टुरेन्ट दोहोरीसाँझ, मसाज पार्लर, बार, डिस्कोलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिला कामदारलाई हेर्न नेपाली मध्यमवर्गीय समाजको चस्मा त्यति उचित छैन । त्यो चस्माले ती महिलाको काम र उनीहरूको यौनको विषयमा फरक रूपमा बुझ्दैन । यो गलत बुझाइविरुद्धमा ती क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले आफ्नो कामको मर्यादाका लागि संगठित रूपमा नै लडिरेहका छन् । किताबमा ती मान्छेहरूको बारेमा पनि लेखिएको छ तर सतही ढंगले । केही हदसम्म यौनकर्मीको रूपमा पनि । किताब पढ्दा घरीघरी लागिरह्यो, यौनकर्म गर्नु र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा कामदार भएर काम गर्नु फरक हो भन्ने कुरालाई लेखकले चटक्कै बिर्सिएकी छन् । यस विषयमा लेखकको बुझाई र अध्ययन नपुगेजस्तो लाग्यो ।
किताबमा समयको उडान फट्याङ्ग्रो उफ्रेको जस्तो छिटोछिटो दौडिरहेको देखिन्छ । यौन दुर्व्यवहारमा परेकी बालिका यौन दुर्व्यवहारमा परेपछि एकै पटक बीए पास हुने अवस्थामा पुग्छे । बीचमा पटकपटक यौन दुर्व्यवहारमा परेको उल्लेख भए पनि उसले गरेको प्रतिकार वा विरोधको कुरा छैन । पटकपटक वरिपरि भएको काकाको बारेमा उसले दशकसम्म केही नबोली बलात्कृत मात्रै भइरहेको कुरा त्यति स्वाभाविक लाग्दैन । नभनेको भए पनि उसको मनमा उठ्ने भावनाको कुरा त्यो भावना अरूसँगको व्यवहारमा प्रकट हुने कुरालाई लेखकले पात्र किताबमा मात्रै केन्द्रित भएको भनेर छोडिदिएकी छन् । घरेलु हिंसामा परेकी सोही महिलाले किन विद्रोह गर्न सक्दिन भन्नेबारेमा कुनै उपकथा जोडिनन् बरु काम गर्न आउने कान्छीसँग बाँडेर हलुका भएको मात्रै जोडिएको छ ।
उपन्यासको भाषा ससल बग्छ । ‘आधि’ आजको समयमा उठाउनै पर्ने सवाल उठाउने उपन्यास हो । तर, यसलाई नयाँ ढंगले भने लेखिएको छैन । विषयलाई यसरी नै हेरेर यसअघि पनि लेखिएका छन् । बरु, महिला पुरुषमा नै भर पर्नुपर्ने रहर वा बाध्यताको जुन लम्बेतान पुरुष भाष्य वा सोचको सिलसिला चलिरहेको छ, पारपाचुके गरेको श्रीमान्का बाआमासँग सहयोग मागेको कथा जोडेर उक्त सोचलाई ‘सिमेन्टेड’ गर्ने काम यो पुस्तकले पनि गरेको छ । छोराले छोडपत्र गरेर अर्कैसँग विवाह गरेपछि पनि बुहारीलाई माया गर्ने सासू–ससुरा त यसमा छन् तर हिंसामा परेर छोडपत्र गरेका महिलालाई प्रेरणा दिने कुरा खासै छैन । हिंसामा परेका महिलाले गरिरहेको विद्रोहको कुरालाई यसमा खासै ठाउँ दिइएको छैन । महिलालाई सहनशीला सुशीलाको रूपमै चित्रण गरिएको छ ।
यो उपन्यासमा एक उच्च मध्ययमवर्गीय सम्भवतः कुनै प्रकारको गम्भीर हिंसा नभोगेकी महिलाको जीवनदृष्टि पाइन्छ । जहाँ महिलाहरू श्रीमान् कार्यालय गएपछि तास खेलेर सधैं रमाइलो गरेर समय कटाउँछन् । महिला सकेसम्म पुरुषको भर पर्छन्, उनीहरूको छुट्टै अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्न चाहन्नन् ।अन्त्यमा लेखकले हिंसा प्रभावित महिलाले अरूको लागि समाजसेवा गर्नका लागि सुरक्षा आवासका खोलेको कुरा उल्लेख गरेकी छन् । तर, पात्रको जुन आर्थिक हैसियत र सामाजिक पहुँच छ त्यो सुरक्षा आवास चलाउने तहको देखिदैन । सुरक्षा आवास सजिलै खोल्न सकिने कुरा होइन ।
प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ १०:४१
बलात्कार भनेको दुई व्यक्तिबीच मन नमिल्दा-नमिल्दै गरिएको जबर्जस्ती हो । चाहे उनीहरू बीचमा दशकौँ लामो प्रेम, विवाह, यौन व्यापार वा पारिवारिक वा हाडनाताको सम्बन्ध नै किन नहोस् । यस्ता घटना प्राय: नदेखिने ठाउँमै हुन्छन् । प्रमाणहरू कम हुन्छन् । नैतिकपतनको विषयसँग जोडिएको हुँदा यस्ता घटना दबाउन आर्थिक प्रलोभन, डरधम्की र ज्यानै लिनेसम्मको हर्कत हुन्छन् । मुलुकमा यस विषयमा स्पष्ट कानुन भए पनि सामाजिक रूपमा धेरै मानिस (प्रहरीसमेत) अस्पष्ट हुने र शक्तिको प्रभावमा परेर सत्ता र शक्तितर्फ ढल्कने गरेका छन् । त्यसैले आफूमाथि पीडा भयोभन्दा पनि सहयोग नपाउने अवस्था भएकाले महिलाहरू उत्पीडनका घटना फिर्ता लिन बाध्य छन् । यो बाध्यता अन्त्यका लागि महिलालाई एक स्वतन्त्र नागरिक हुन दिनु नै पहिलो सर्त हो, जसले गर्दा ऊ आफूमाथि हिंसा हुँदा निर्धक्क बोल्न सकोस् ।
प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०८:४०